မိစ္ဆာဝါဒ ကွင်းဆက်များ | ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှားရေးအသငျးခြုပျ
Home » ဦးအေးမောင် » မိစ္ဆာဝါဒ ကွင်းဆက်များ
အရှင်ကောဝိဒ (ယော) | 2:07 AM | ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ | အဓမ္မ၀ါဒကွင်းဆက် | အရှင်ကောဝိဒ(ယော) | ဦးအေးမောင်
Posted by အရှင်ကောဝိဒ (ယော) at 2:07 AM
ချမ်းငြိမ်း October 14, 2010 at 5:24 AM
အရှင်ဘုရားရဲ့ဝေဖန်မှုဟာကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်မပါတဲ့ဝေဖန်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အချက် အလက်နဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းမဟုတ်ပဲအမုန်းတရားနဲ့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့တူနေပါ တယ်။သူတို့ရဲ့စာတွေဟာဗုဒ္ဓဘုရားကိုစော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါ။အဌကထာရဲ့လွန် ကဲစွာဖွင့်ဆိုမှုကိုဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းပါ။လူလောကကိုကောင်းကျိုးမပြုနိုင်တဲ့အ သုံးမတည့်တဲ့တရားတွေကိုတရားမလုပ်စေချင်တဲ့စေတနာပါ။ပါဌိစာမြင်တိုင်းဘုရား ဟောချည်းဘဲမထင်ပါနဲ့။တရားဂုဏ်ရည်၆ပါးနဲ့ညီညွတ်သလားအရင်စမ်းစစ် ပြီးမှလက်ခံရမှာပါ။ကိုယ့်တရားကိုယ်ဂုဏ်ရည်၆ပါးနဲ့ညီမညီအရင်စစ်ပါ။
Socretes February 25, 2011 at 9:42 PM
ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်မိပြီးမှ...ဝေဖန်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ချင်လာတော့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဦးအေးမောင် ယူဆချက်တွေက လက်တွေ့ ကျပြီး ကျိုးကြောင်းမျှတပုံပေါ်တယ်။ မိမိတို့ လို မျိုးဆက်သစ်တွေ ဒီလိုစာအုပ်တွေကိုထိတွေ့ ခွင့်မရတာ ၀မ်းနည်းစရာတော့အကောင်းသား။ လူသားရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုလျှင်..ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေကို ဖတ်ခွင့်ပြုသင့်..ဆွေးနွေးခွင့်ပြုသင့်တယ်။ အယူအဆတစ်ခုကို စကားလုံးတစ်လုံး၊ ၀ါကျတစ်ကြောင်း ကို လိုရာပုံဖေါ် အနက်ကောက်ပြီး ဘုရားဟောတရားနဲ့ လုံးဝလွဲချော်တယ်..အန္ဓရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ဟာ တော်တော် သဘောထားကျဉ်းတယ် မြင်မိတယ်။ှုမှန်ခြင်းမှားခြင်းဆိုတာ စာအုပ်တွေထဲမှာပဲဘောင်ခတ်ထားသလား??? စာအုပ်တိုင်းဟာ လုံးဝခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ကြသလား??? ဝေဖန်ခံထားရတဲ့စာအုပ်တွေဟာ...အသိညဏ်ဖွံ့ ဖြိုးမှုအတွက် အထောက်အကူဘာမှမရနိုင်တော့ဘူးလား??? ကာလမသုတ္တန်ကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးခြင်းသာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်မြင်မိတယ်။